« prev 1 … 2 3 4 5 6 … 907 next »
Ganacsade Cali Marguus oo saaka lagu dilay beer uu ku lahaa duleedka Baydhabo
Sagal Radio Services • News Report • August 9, 2019
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in ganacsadaha caanka ah Cali Aadan Xuseen (Cali Marguus) lagu dilay saaka beer uu ku lahaa deegaanka Maaya Fuulka ee duleedka Baydhabo.
Daawo Sawirro: Garoonka Kubadda Cagta ee Banaadir oo loogu magac daray Eng. Yariisow
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in Garoonka Ciyaaraha ee Banaadir loogu magac daray Guddoomiyihii Gobolka Banaadir iyo Duqii Muqdisho, Alle ha u naxariistee Marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yariisow), taas oo maamuus iyo xasuusin u ah doorkii waddaninimada ahaa ee uu ka soo qaatay dib u dhiska dowladnimada iyo horumarinta Caasimadda.
Madeira oo sheegay Al-Shabaab inay doonayaan sidii ay ku noqon lahaayeen awood Siyaasadeed
Wakiilka Midowga Afrika ahna madaxa howlgalka ciidammada AMISOM, Francisco Madeira ayaa ka hadlay dagaalka Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya, kuwaas oo uu sheegay inay beddeleen hab-kooda dagaal.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • August 3, 2019
Taliska qeybta 21aad oo isbedel lagu sameeyay
Sagal Radio Services • News Report • August 3, 2019
Kusimaha Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka ahna Taliye ku xigeenka Ciidanka S/gaas Cabdi Xasan Maxamed ayaa is badal ku sameeyay qaybo ka mid ah Taliyaasha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqedisho ayaa tasci ugu tegay qoyska iyo ehelka guddoomiyihii gobalka Banaadir, Eng. Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan.
Maxaa loo fasirri karaa tallaabada Madaxweyne Farmaajo uga laabtay Jinsiyadda Mareykanka ? Faallo
Tallaabada Madaxweyne Farmaajo uu kaga tanaasulay jinsiyaddii labaad ee Mareykanka ma bilow olole doorasho uu mar kale u galayo in dib loo soo doorto mise waa farriin ku socoto Siyaasiyiinta labada Jinsiyaddood wata ee la filayo inay ku soo hirtaan tartanka Madaxtinimada Soomaaliya sanadka 2021 ?